မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ..။ - ချစ်သူ့ အ်ိမ်ကလေးမှကြိုဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ..
♥♥♥♥ချစ်သူအိမ်ကလေးကိုအလည်ရောက်လာသောသူငယ်ချင်းများ အားလုံး ပျော်ပျော်ကြီး ဗေဒင်တွက်ကြရအာင်ဗျာ။♥♥♥♥
♣♣♣♣♣ ဗေဒင်တွက်ပြီး ရလဒ်လေးများ မှတ်သားပေးပါသွားပါအန်ုးဗျာ..။♣♣♣♣♣
♣♣♣♣♣ စိတ်ဝင်စားဖွယ် ဂိမ်းဗေဒင် ♣♣♣♣♣
ငယ်ချင်းတို့ရေ ဒီဗေဒင်လေး တွက်ဖို့ အတွက် ဘောပင်တစ်ချောင်ရယ် စာရွက်လေး တစ်ရွက်ရှိရင် ရပြီးနော် စိတ်ဝင်းစားဖို့ကောင်းလို့ တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
ဖြေကြည့်မယ်ဆို စိတ်ဝင်တစား ဖြေပါ။ လျှောက် ရမ်းမရေးပါနဲ့။ တစ်ခါပဲ ဖြေလို့ရပါမယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဖြေ သိပြီးမှ ဆိုရင် နောက်တစ်ခေါက် ဖြေလို့ အဖြေမှန် မထွက်နိုင်တော့ပါဘူး။
1.) အရင်ဆုံး ၁ ကနေ ၁၁ အထိ အမှတ်စဉ်ကို အပေါ်အောက် ချရေးထားပါ။
2.) ပြီးရင်...၁ နဲ့ ၂ မှာ - ကြိုက်ရာ ဂဏန်း တစ်ခုစီရေးပါ။ ဥပမာ- (ကိုက 4ကိုကြိုက်ရင် နံပတ်1မှာ လေးလို့ရေပေါ့ နံပါတ်2မှာလဲ အဲလို့ပါပဲ) 3.) ၃ နဲ့ ၇ မှာ - ဆန့်ကျင်ဘက်လိင် တစ်ဦးစီရဲ့ နာမည်တွေ ရေးပါ။
(ကိုယ်က ယောင်္ကျားလေးဆို မိန်းကလေး နာမည်။)(၃ မှာ တစ်ယောက် ၇မှာ တစ်ယောက်)(အများကြီး မစဉ်းစားပဲ ခေါင်းထဲ ပေါ်လာတဲ့ နာမည်တွေကိုသာ ရေးပါရန်။)
4.) ၄ ၊၅ နဲ့ ၆ မှာ ကျား/မ မရွေး တစ်ယောက်ယောက်စီရဲ့ နာမည်တွေ ရေးပါ။
(သူငယ်ချင်း ၊ မိသားစုဝင် လိုမျိုး။)
5.) ၈၊ ၉၊ ၁၀၊ ၁၁ နေရာတွေမှာ သီချင်း ခေါင်းစဉ် တစ်ခုစီ ရေးပါ။
6.) ဆုတောင်းပါ။ မှတ်ချက်။။။။။။။။။
ကဲ ကိုယ်ဖြေလိုက်တာ ဘာအဓိပ္ပါယ်လဲ။ အောက်မှာဖတ်ကြည့်ပါကံကောင်းပါစေ...
နံပါတ် ၃ က သင်ချစ်တဲ့သူပါ။
နံပါတ် ၇ က သင်ကြိုက်တဲ့သူ၊ ဒါပေမယ့် မဖြစ်နိုင်ဘူး။
နံပါတ် ၄ ကိုကျတော့ သင် အရမ်း ဂရုစိုက် အရေးထားပါတယ်။
နံပါတ် ၅က သင့်ကို အသိကျွမ်းဆုံး။
နံပါတ် ၆က သင့်ရဲ့ lucky star
နံပါတ် ၈ သီချင်းက နံပါတ် ၃ကလူနဲ့ သက်ဆိုင်နေတယ်။
နံပါတ် ၉ သီချင်းက နံပါတ် ၇ ကလူနဲ့ အတွက်။
နံပါတ် 10 ကတော့ သင့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်။
နံပါတ် ၁၁ က သင့်ရဲ့ ဘဝ အမြင်။
နံပါတ် ၂ နေရာမှာ ရေးခဲ့တဲ့ အရေအတွက် လူဦးရေကို ဒီ post ကို ပြောပြလိုက်ပါ။ :)